Ny raboka (tuberculose)
Naseho ny : 19 marsa 2022
Ny raboka "tuberculose" dia aretina azo avy amin'ny otrik'aretina "bacile de Koch" na BK, izay haparitaky ny marary, tsy voatsabo, eny amin'ny rivotra iainana. Ny faritra mety hisehoany dia ny aretina amin'ny endrika maro: ny ao amin'ny tratra, ny anaty avokaoka na ivelany, ny amin'ny hoditra, taolana, ny atodi-tarimo. Fambara : fisian'ny kohoka 2 herinandro, manavy, tsemboka amin'ny alina, malain-komana, mihamahia, rera-dava, marary ny tratra, misy rà ny rehoka. Enim-bola eo ho eo ny faharetan'ny fitsaboana izay maimaimpoana.
Fanaintainana miseho amin'ny faritry ny kibo
Naseho ny : 5 marsa 2022
Misy fizarana sivy ny faritry ny kibo, ka samy hafa, araka izay faritra ahatsapana fanaintainana ny aretina mety mahazo ny olona iray. Ny fizarana sivy : mizara telo amin'ny tsanganana, avy eo ambany nono hatreo amin'ny valahana, ary mizara telo ihany koa ny avy amin'ny lafiny avia miankavanana ; somary lehibe kokoa ny faritra afovoany rehetra manandrify ny foitra. Ny fanaintainana amin'ny faritry ny kibo dia tsy aretina fa soritr'aretina. Ny karazan'ny fanaintainana : manindrona, mavesatra, manotika, miolana...
Ny aretina androbe
Naseho ny : 19 febroary 2022
Isaky ny 14 febroary no fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny androbe. Ny androbe dia aretina ateraky ny fikorontanan'ny fiasan'ny atidoha. Ny antony mampikorontana ny asan'ny atidoha dia ny fisan'ny fihenan'ny herinaratra manampy amin'ny asa fibaikoana hataon'ny atidoha. Maro ny antony mahatonga ny androbe : azo hatrany am-bohoka, azo avy amin'ny reny nandritry ny fitondrana vohoka, fahasimban'ny faritra ao amin'ny atidoha, fivontasana na omamiadana amin'ny atidoha...
Aretina mateti-pitranga amin'ny fahavaratra
Naseho ny : 12 febroary 2022
Ny 11 febroary dia andro maneran-tany natokana hatsiarovana ny marary rehetra. Maro ny aretina mateti-pitranga rehefa fahavaratra, isan'ireny ny aretim-pivalanana, areti-koditra, aretin'ny taova-pisefoana, ary ny tazomoka. Mampiabo ny fipariahan'ny aretina rehefa fahavarana ny fikorontanan'ny tontolo iainana : rivotra maloto, rano miandrona sy maloto, ny fiovaovan'ny toetrandro, fifandimbiasan'ny hatsiaka sy ny hafanana.
Pejy 4 amin'ny 17